Into ekufuneka uyenzile xa uthumele ulwalamano lwakho: Iingcebiso ezili-12 eziluncedo! - Ubudlelwane
Into ekufuneka uyenzile xa uthumele ulwalamano lwakho: Iingcebiso ezili-12 eziluncedo!
Wenze into embi. Akudingeki ukuba siyazi ukuba yintoni, kodwa, ukuba iphazamise ubudlelwane bakho, kufuneka uyilungise ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Nokuba yinto enye okanye wenze into engaguquguqukiyo ngokuhamba kwexesha (ngaphandle kokuqonda, mhlawumbi), kuya kufuneka wenze utshintsho kwindlela oziphethe ngayo - ngoku.
Nazi ezinye iingcebiso malunga nokwenza ulungiso kuyo nayiphi na into oyenzileyo.
1. Yimpazamo yakho.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuvuma ukuba wenze impazamo.
Nobabini niyazi ukuba yenzekile kwaye uyaxoka okanye uzama ukuzikhusela mhlawumbi ngekhe uncede kule meko.
Yenza kucace kwiqabane lakho ukuba uyazi ukuba umoshile, kuba kokukhona uzama ukuzenza ngathi awukho mpazamo okanye uzame ukuphepha uxanduva, kokukhona baya kukhathazeka kwaye bacaphuke.
Usenokungafuni ukuyamkela, kodwa ukuphikisana ngento ecacileyo ukuba nobabini niyibone ayisiyongcamango ilungileyo, sithembe.
2. Thetha yonke inyani.
Ukuba umoshile kwaye uthetha neqabane lakho malunga nalo, musa ukufihla nto kubo.
Eyona nto imbi ngaphezu kokufumanisa ukuba ungcatshwe kukufumanisa okwesibini ukuba bekukho okungakumbi kunoko kuvunyelwe liqabane lakho.
Ukuba ukhohlise kabini kodwa iqabane lakho licinga ukuba kwenzeke kube kanye, umzekelo, kuya kufuneka ubaxelele ngoku.
uyeke kanjani ukuba nomsindo nobukrakra
Sukubenza bazive ngathi bayigug ngokubaxelela isiqingatha senyaniso ngoku kwaye ubavumele bazifumanele ezinye kamva emgceni- kuba ngokuqinisekileyo baya kuthi.
Kufuneka uthembeke kwaye uvume kuyo yonke into ngaphambili - ukuba uyabahlonipha konke konke, uyakuqonda ukuba kutheni kubaluleke kangaka.
3. Uxolo - kwaye yinyani.
Ewe kunjalo, babenze baqonde indlela ozisola ngayo. Khangela iindlela zokuyibonisa, yitsho, ubenze bakholelwe kangangoko unako.
Ungayithethi njengengxelo engekhoyo okanye uyimbombozele phantsi komphefumlo wakho.
Thatha uxanduva lwento oyenzileyo, uvume ukuba wenzakalise umntu omthandayo, kwaye wenze kakhulu, kakhulu kucace ukuba uyaxolisa.
4. Ngqina ukuba awuzukuphinda uyenze kwakhona.
Ukuba umoshe, yenza umzamo wokubonisa ukuba awuzukuphinda wenze impazamo efanayo.
Ngqina kwiqabane lakho ukuba wenza utshintsho olufunekayo ukwenza olu lwalamano lusebenze.
Unokuziva ngathi izinto ziye zafa emva kweentsuku ezimbalwa, kodwa kusafuneka ubeke umzamo wokubabonisa ukuba utshintshile kwaye uza kwenza nantoni na ukuze izinto zisebenze.
5. Kulungele ukulalanisa.
Ukuba ukhohlisile iqabane lakho kunye nomhlobo osenyongweni, kuya kufuneka wamkele ukuba abanakuze baphinde baphinde babone umhlobo wakho kwakhona.
nini ukuthumela umyalezo kumfana emva kokulala naye
Ukuzincama kuya kufuna ukwenziwa- kwaye unokuzibek 'ityala wena kuphela. Iqabane lakho linamalungelo okulindela ulungelelwaniso kunye notshintsho kwindlela oziphethe ngayo.
Uyabenzakalisa kwaye kufuneka ubavumele bakhokele xa kufikwa kubo bachaza into abayifunayo ukuze bazive bekhululekile kwaye bekhuselekile kubudlelwane kwakhona.
izimvo zento eyonwabisayo ngam
Oku akufuneki ukuziva ngathi kohlwaywa, kodwa kuya kufuneka uzive njengotshintsho olusebenzayo kunye nobungqina bokuba awuzukuphinda uyenze.
6. Babonise ukuba zezona ziphambili kuwe.
Qinisekisa ukuba ubonisa iqabane lakho ukuba ubakhathalele kangakanani kwaye uyabuxabisa ubudlelwane bakho nabo.
Ukuba umoshile kwaye ufuna ukulungisa izinto, kufuneka ubabonise ukuba uyabathanda kwaye ufuna izinto zisebenze phakathi kwenu.
Banokuziva bengcatshiwe okanye bengakhathalelwanga, kwaye kuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukususa ezi ngcinga ezingqondweni zabo ngokuzenza zibaluleke ebomini bakho.
Bothuse ngezipho ezintle okanye iihagi ezingahleliwe, phuma endleleni yakho ubazise ukuba uyakhathala, kwaye ube nebhongo lokubonisa umhlaba obathandayo.
Oku kuya kubanceda bazive bezithembile ngokwabo emva kokungathembeki okanye ukungcatshwa kolunye uhlobo, kwaye kuya kunceda ukulungisa umonakalo owenzileyo.
7. Veza xa kubalwa.
Uza kubalapho. Ukuba uphambene ngokungaze ubekho ngokwaneleyo okanye ngokuthatha iqabane lakho njengelingakhathaliyo, yenza umzamo wokuba ubekhona kwizinto ezibalulekileyo.
Musa ukurhoxisa ubusuku bomhla. Gcina ukuzibophelela kwakho neqabane lakho.
Nabani na onokuba liqabane elilungileyo kangange veki. Ukuze ubonise ngokunyanisekileyo ukuba uyazisola ngezenzo zakho kwaye ufuna ukwenza ubudlelwane busebenze, kufuneka uzibophelele.
Kufuneka ube ungaguquguquki kwaye uzenze ezi zinto zibe ngumkhwa, hayi uxolisa kube kanye.
Iqabane lakho liya kuba namandla kunakuqala ukuze liziva likhuselekile kwaye lixabisekile, kwaye oko ngekhe kwenzeke kwiveki.
I-wwe wrestling elite isilinganisi
Sukwenza izinto ngenxa yazo njengoko uza kuthi nje wenze izinto zibe mbi ngakumbi xa beqonda ukuba awunakukhathazwa ukunamathela kuyo.
Zibophelele ekuboniseni ukuba ukhathalele kangakanani kwaye usete umgangatho omtsha ngokwakho kulwalamano.
9.Nxibelelana ngokunyanisekileyo nangokuphandle.
Nokuba wenze ntoni na ukungcolisa izinto kubudlelwane bakho, izinto zinokuziva zixinekile okanye zinamatye okwethutyana.
Oku kuqhelekile - kukho into enkulu eyenzekileyo yokucaphukisa omnye wenu, kwaye kukho nomba wokuba ngoba wenze into embi kwasekuqaleni!
Umlingane wakho mhlawumbi uziva esoyika kwaye ebuthathaka, ke kuya kufuneka ujonge kunxibelelwano okwangoku.
Qala incoko ethembekileyo kwaye uhlale uzolile - eli ayiloxesha lokuqala ukuzikhusela, lixesha lokuba umamele indlela iqabane lakho elivakalelwa ngayo kwaye ubonise ukuba uyakhathala.
10. Qonda ukuba iqabane lakho lisenokufuna indawo.
Unokuziva ngathi ufuna ukuchitha ixesha elininzi kunye ukwenza yonke into eyenzekileyo, kodwa iqabane lakho lisenokufuna indawo yokwenza.
Kukulinga kakhulu ukubathambisa ngothando nothando kwangoko - emva kwayo yonke loo nto, usenokuba uziva woyike ngokubenzakalisa kwaye ityala linokukwenza ufune ukuba kufutshane nabo kwaye uzame ukubonwabisa.
Inxalenye yokuhlonipha umntu kukwamkela ukuba bayazi ukuba yeyiphi eyona nto ibalungeleyo. Ukuba bafuna ixesha elithile bodwa lokuqhubekeka kunye nokufumanisa ukuba bafuna ukwenza ntoni ukuya phambili, kuya kufuneka ubanike.
11. Yamkela into yokuba kungathatha ixesha ukuba umntu wakho akuxolele.
Nangona kunjalo ngokukhawuleza ucinga ukuba kufuneka niqhubeke nobabini emxholweni kwaye nibuyele esiqhelweni, kuya kufuneka niyeke iqabane lakho likhokele kule.
Basenokufuna ixesha elithile ukuze bakwazi ukukuxolela.
Kuqhelekile ukuba uzive ukhathazekile yile - emva kwayo yonke loo nto, uthe uxolile kwaye uphinde waba liqabane elihle.
ndenze ntoni ngosuku lokuzalwa kwamasoka am
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ngenene ukuqhubela phambili kunye, kuya kufuneka ubavumele bathathe ixesha lokuqhubekeka ngokufanelekileyo kwaye basebenze ngendlela abaziva ngayo.
Ukuba oku kuthatha ixesha elide kunokuba ufuna, yima. Ungangxami kwisigqibo njengoko uza kubeka uxinzelelo kubo kwaye unokugqibela ubacaphukisa nangakumbi.
Bayeke bakhokele, babekhona xa bekufuna, kwaye uhlale uxolile kwaye unothando ngokwenyani njengoko bafuna wena.
12. Yazi ixesha lokuyiyeka kwaye ulibize ngokuba ngumhla.
Le yoyikekayo kodwa, yinxalenye yokuba kubudlelwane.
Kuya kufuneka uyamkele into yokuba iqabane lakho lingonwabi ukuhlala nawe emva kokuba umoshile. Banokuziva ngathi izinto zenzeka rhoqo, okanye ngathi ngekhe uzitshintshe iindlela zakho.
Ungathetha ngale nto, ewe, kwaye wenze konke okusemandleni ukubakholisa ukuba bahlale nawe, kodwa, ekugqibeleni, banamalungelo abo okuhamba ngokulungileyo.
Ngamanye amaxesha akukho nto unokuyenza ukutshintsha loo nto. Ukwamkelwa kuphela kwendlela yokuya phambili.
Ngaba awuqinisekanga ukuba wenzeni ukubuyisela ubudlelwane bakho emgceni emva kokuba umoshile? Thetha kwi-Intanethi kwingcali yobudlelwane kwi-Relationship Hero enokukunceda ufumane izinto. Ngokulula.
Indlela yokucela uxolo ngokunyanisekileyo kwaye ngokuchanekileyo kwaye uyithetha
Ungamenza njani umntu ukuba Akuxolele: Amanyathelo ama-6 okucela uxolo
Indlela Yokwenza Nomntu Ongayi Kukuxolela: 6 Akukho Ngcebiso Zobubhanxa
Ungayakha njani kwakhona kwaye uphinde ufumane iTrust emva kokuXoka kwiQabane lakho
andiziva ndithandwa ngumfana wam
njani ukuhlonipha umntu obhinqileyo kubudlelwane
iindlela zokuxelela intombazana ukuba intle
ungaxelela njani ukutyumza kwakho uyabathanda
andazi apho ndihlala khona
Uhlala phi tana mongeau